कसरी हुन्छ एलर्जी ? - ज्ञानविज्ञान
कसरी हुन्छ एलर्जी ?
हामीले खाएको खानादेखि लिएर आन्तरिक वा बाह्य रुपमा प्रतिक्रिया भई शरीरमा बेचैनी हुनु एलर्जी हो । एक वा विभिन्न बाह्य कारणले एलर्जी हुन सक्छ । एलर्जी एउटा क्षणिक समस्या भए पनि कतिपय अवस्थामा यसका कारण ज्यान नै जोखिममा पर्न सक्छ ।
एलर्जीको खास कारण नै शरीरमा प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुनु हो । खानेकुरा, प्रयोग गर्ने सामग्रीदेखि वातावरण र मौसमले समेत एलर्जी गर्छ । जस्तो कसैलाई बिहान उठ्नेवित्तिकै चिसोको कारण निरन्तर हाच्छ्युँ हुन्छ भने कोहीलाई कुनै औषधी खाँदा वा लगाउँदा एलर्जी हुन्छ । कपालमा मेहन्दी लगाउँदादेखि पानी छँुदासम्म एलर्जी हुने गरेको पाइएको छ ।
कतिपय एलर्जी निकै घातक हुन्छन् । श्वास फेर्न गाह्रो हुने, छाती दुख्ने वा छाती पोल्ने लक्षण देखिएमा तत्काल चिकित्सककहाँ जानुपर्छ । विशेष गरी बारुला, अरिंगाल, माकुरालगायतका किरा र झिँगाले टोक्दा शरीर निकै सुन्निने गर्छ ।
खानेकुरामा हुने प्रोटिनले पनि शरीरमा एक प्रकारको एलर्जी बनाउँछ । बदाम, अन्डा, गहुँको पिठोबाट बनेका परिकारले ९० प्रतिशतसम्म एलर्जी हुने गरेका विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरेका छन् ।
धुलोका कणहरु नाकभित्र छिरेर नाक बन्द हुने, हाच्छ्युँु आउने, खोकी लाग्ने र घाँटी खसखस हुनु धुलोको एलर्जी हो । यस्तो समस्याबाट आम सहरिया मानिस र विशेष गरी धुलो धुवाँमा हिँडडुल गर्ने व्यक्ति प्रभावित हुने गरेका छन् । चीनमा धुलोको एलर्जीबाट वर्षेनी हजाराँै मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ ।
मौसम र वातावरण परिवर्तनसँगै मानिसलाई विभिन्न प्रकारका एलर्जी हुने गर्छ । चिसो मौसम सुरु हुँदा नाकबाट पानी वग्ने, निरन्तर हाच्छ्यँु आउने गर्छ । त्यस्तै गर्मी मौसममा आँखा रातो हुनु, अनुहारमा डावर आउनु, छालाको कत्ला परिवर्तन हुने गर्छ ।
पाल्तु जनावरबाट हुने एलर्जी
घरेलु कुकुर, विरालो, खरायो, सुगालगायतका पन्छी र जनावरबाट पनि एलर्जी हुने गर्छ । यी पन्छी र जनावरका प्वाँख, छाला, नंग्रा इत्यादिबाट एलर्जी हुने गर्छ । जनावरको शरीरमा टाँसिएको धुलो र तिनीहरुको गन्धले मानिसलाई घन्टाँैसम्म टाउको दुख्ने, बान्ता आउने वा रिंगटा लाग्ने गर्छ । विशेष गरी चिडियाखानामा जाँदा मानिसलाई यस्तो समस्या देखिन्छ ।
औषधीबाट हुने एलर्जी
औषधीले शरीरभित्र सिर्जना गर्ने रासायनिक परिवर्तन वा औषधीप्रति शरीरको रोगप्रतिरोधात्मक नकारात्मक प्रतिक्रियाले पनि शरीरमा एलर्जी हुने गर्छ । यो एलर्जी निकै घातक हुन्छ र कहिलेकाहीँ ज्यानै जान सक्छ ।
कस्मेटिक सामग्रीमा प्रयोग हुने रसायनहरुले छालामा फोका, पसिना आउने र अनुहार रातो भएर सुन्निने गर्छ ।
धुलो, मौसमी परिवर्तन र जनावरबाट हुने एलर्जीले श्वास फेर्न गाह्रो हुने, नाकबाट पानी बग्ने, आँखा सुन्निने, आँखाबाट आँसु आउने, रिंगटा लाग्ने, टाउको र घाँटी दुख्ने र नाक थुनिने गर्छ ।
खानाको एलर्जीले मुख र घाँटी दुख्ने तथा सुन्निने, नपच्ने, बान्ता आउने, रिंगटा लाग्ने, पेट दुख्ने र पखाला लाग्ने हुन्छ । त्यस्तै श्वासप्रश्वासमा समस्या आउने, खोकी लाग्ने र हाच्छ्यँु आउने गर्छ ।
औषधी र कस्मेटिक एलर्जीले श्वास फेर्न गाह्रो हुने, छाला रातो हुने, फोका आउने, पसिना आउने, छाला खुुइलिने आदि लक्षण देखिन्छ ।
एलर्जीबाट बच्ने उपाय
त्यसो त एलर्जीको खास औषधी हँुदैन । आफूलाई जे कुराबाट एलर्जी हुन्छ त्यसबाट बच्नु नै यसको प्रभावकारी उपाय हो ।
जस्तै ः नाकको एलर्जी वा हाच्छ्यँु आउने समस्या छ भने धुवाँ, धुलो भएको ठाउँमा जाँदा सकभर मास्क लगाउने ।
आफूलाई एलर्जी हुने खानेकुराको पहिचान गरी एलर्जी हुने खानेकुरा नखाने ।
जनावर र पन्छीसँग धेरै सामिप्यता नबढाउने । कतिपय रोग समेत सर्ने भएकाले पाल्तु जनावरलाई नियमित नुवाइदिनुपर्छ ।
अरिंगाल, वारुला र माकुराले टोक्दा सम्पूर्ण शरीर सुन्निएमा तत्काल चिकित्सककहाँ जानुपर्छ ।
स्वास्थ्य खबरपत्रिका बाट
Don't Miss it जीवनको आयु तपाईंकै हातमा
Up Next यस्ता छन्, ​खुट्टा गन्हाउँने समस्याबाट बच्ने घरेलु उपाय
थाहा पाइराखौं दारीमा स्वास्थ सम्बन्धी कस्ता रहस्यहरु छन् ?
१. यदी तपाइको दारी रुखो र कमजोर छ भने दारीलाई मोइश्चराइजेसनको जरुरी छ । यसको कपालको रौं जस्तै समान केयर…
तौल बढाउन खोज्दा पनि बढ्दैन भने, छन् यस्ता कारण
मानिसहरु फरक फरक भए जस्तै मानिसहरुको इच्छा र चाहना अनि आवस्यकता पनि फरक फरक हुन्छ। त्यसैले कोहि तौल घटाउन तिर…
कलेजो कसरी बिग्रिन्छ, जोगाउन के गर्ने?
कुन कुन खानेकुरा फेरि तताएर खानु हुदैन ? जान्नुहोस्
स्कुल, कलेज वा अफिस जानेहरुका लागि एउटै खाना पटक पटक तताएर खानु सहज मात्रै होइन कि बाध्यता पनि हुन्छ ।…
११ अचम्मलाग्दा दिमागी कसरतहरु जुन सजिला छन् र दिमागलाई तेज बनाउँछन्
ससाना दिमागी कसरतहरुले दिमागलाई स्वस्थ बनाउँछन् । यहाँ लेखिएका दिमागी कसरतहरु गर्नुहोस् जसले स्मरण शक्ति घट्ने क्रमलाई रोक्छ भने दिमाग…
महिलाले निधारमा लगाउने टीका मानसिक तनाव मुक्त हुन्छ
टीका निधारमा नियमित रुपमा लगाउँदा दीमागी नशा सक्रिय हुन्छन् । जसले हामीलाई इनसोमनिया र साइनस जस्ता रोगबाट बचाउँ सहयोग गर्छ।…
जाडो मौसममा यी तरीका अपनाएर आँखालाई सुरक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ
कम्प्यूटरमा धेरै बेर नबस्ने ल्यापटप तथा कम्प्यूटरमा धेरै बेर बस्नाले आँखामा थकान महसुस हुने गर्छ । त्यसैले, प्रत्येक पटक कम्प्यूटर…
तातो पानीले नुहाउदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
​१. ड्राइब्रश प्रयोग नगर्नुहोस् । २. अधिक तातो पानीले नुहाउनु उचीत हुँदैन । नुहाउनका लागि मनतातो पानी प्रयोग गर्नुहोस् ।…